Umgangatho ophezulu weeRandi eziPhezulu eziPhezulu kunye noMthengisi | Yanzhao
Iirandi ezigcweleyo ezigcweleyo
Iintambo ezipheleleyo ezinemisonto ziqhelekile, izinto zokubopha ezifumaneka ngokulula ezisetyenziswa kwizicelo ezininzi zokwakha. Iirandi ziqhubekeka ngemisonto ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye kwaye zihlala zibizwa njengeentonga ezizele ngokupheleleyo, intonga ye-redi, intonga ye-TFL (i-Thread Full Length), i-ATR (Yonke intambo yomsonto) kunye namanye amagama ahlukeneyo kunye nama-akhronimi.
Iintambo ezipheleleyo ezinemisonto ziqhelekile, izinto zokubopha ezifumaneka ngokulula ezisetyenziswa kwizicelo ezininzi zokwakha. Iirandi ziqhubekeka ngemisonto ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye kwaye zihlala zibizwa njengeentonga ezizele ngokupheleleyo, intonga ye-redi, intonga ye-TFL (i-Thread Full Length), i-ATR (Yonke intambo yomsonto) kunye namanye amagama ahlukeneyo kunye nama-akhronimi. Iirandi zihlala zigcinwa kwaye zithengiswa nge-3′, 6’, 10’ kunye ne-12’ length, okanye zinokunqunyulwa kubude obuthile. Yonke intambo yentambo esikiweyo kubude obufutshane ihlala ibizwa ngokuba zii-studs okanye ii-studs ezifakwe ngokupheleleyo.ii-studs ezifakwe ngokupheleleyo azinantloko, zifakwe ngapha nangapha ubude bazo, kwaye zinamandla aphezulu okuqina. Ezi zikhonkwane zihlala zibotshwa ngamandongomane amabini kwaye zisetyenziselwa izinto ekufuneka zihlanganisiwe zidibaniswe ngokukhawuleza.Ukusebenza njengepini esetyenziselwa ukudibanisa izinto ezimbini Iirandi ezinomsonto zisetyenziselwa ukubopha iinkuni okanye isinyithi.Iintonga ezipheleleyo ezinomsonto ziza kwi-anti-corrosion i-stainless steel, i-alloy steel kunye nezinto zentsimbi ze-carbon eziqinisekisa ukuba ulwakhiwo alwenzi’buthathaka ngenxa yomhlwa.
Izintambo ezipheleleyo ezisetyenzisiweyo zisetyenziswa kwizicelo ezininzi ezahlukeneyo zokwakha. Iirandi zinokufakwa kwizibiyeli ezikhoyo zekhonkrithi kwaye zisetyenziswe njengeankile ze-epoxy. Izitokhwe ezimfutshane zinokusetyenziswa zidityaniswe nenye into yokuvala ukwandisa ubude bayo. Yonke imisonto inokusetyenziswa njengezinye iindlela ezikhawulezayo zeentonga ze-anchor, ezisetyenziselwa ukudibanisa umbhobho wefayipi, kwaye isetyenziswe njengeebhotile zokuxhobisa kabini kumzi mveliso weepali. Zininzi ezinye izicelo zokwakha ezingakhankanywanga apha apho kusetyenziswa yonke intambo yentambo okanye izikhonkwane ezizele ngokupheleleyo.
Izikere zentsimbi emnyama ezimnyama zithomile ukumelana nokuthamba kwiindawo ezomileyo. Izikere zentsimbi ezifakwe intsimbi zinciphisa umhlwa kwiindawo ezimanzi. Izikulufu zentsimbi ezimnyama ezinganyangekiyo umhlwa kunye neeklinikhi kwaye zimelana neeyure ezili-1 000 zetyuwa yokutshiza ityiwa. khetha ezi zikhonkwane ukuba awuyazi imisonto nge-intshi. Imisonto entle kunye neyongezelelweyo-ethe-ethe yahlulwa ngokusondeleyo ukunqanda ukukhululeka kukungcangcazela; Ukucoca umsonto, kokukhona ukuxhathisa.Iibholiti zeBakala 2 zihlala zisetyenziselwa ukwakha izinto zokudibanisa iinkuni. Iibholiti zebakala 4.8 zisetyenziswa kwiinjini ezincinci. IBakala 8.8 10.9 okanye i-12.9 iibholithi zibonelela ngamandla aphezulu. Olunye uncedo lweebholithi ezinama-welds okanye ii-rivets kukuba zivumela ukwenziwa lula kokulungiswa kunye nokugcinwa.
P Amazinyo arhabaxa 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5
Amazinyo amnandi / / / / / / / 1 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5
Amazinyo amnandi / / / / / / / / 1 1.25 / / /
ubunzima(Intsimbi)≈ikg 18.7 30 44 60 78 124 177 319 500 725 970 1330 1650
d M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 (UM39) M42 (M45) M48 (M52)
P Amazinyo arhabaxa 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
Amazinyo amnandi 1.5 1.5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Amazinyo amnandi / / / / / / / / / / / /
ubunzima(Intsimbi)≈ikg 2080 2540 3000 3850 4750 5900 6900 8200 9400 11000 12400 14700
Egqithileyo Iibholiti zokuPhela eziPhindwe kabini
Okulandelayo: Iwashi yasendlwini
Amandla aphakamileyo eHex Bolts, Din6921 esisangqa Amandongomane, I-Hexagon Socket Head Bolts, I-Oxidation emnyama yeHex Bolts, Ukwaleka okuMnyama kweHex Bolts, Iibholiti,